तपाईं ग्लोबल मार्केटप्लेसको लाभ लिइरहनु भएको छैन Martech Zone
भर्खर मैले स्थानीय खुद्रा विक्रेतालाई भ्रमण गरें। ऊसँग एउटा अविश्वसनीय व्यवसाय र स्थान छ जहाँ उसले डिजाईन, मर्मत र बिक्री सबै व्यापार गर्न सक्दछन् स्क्र्याचबाट। उनका सुविधाहरू देशका सब भन्दा राम्रो हुन्, र आफ्नो स्टाफमा प्रत्येक व्यक्ति असाधारण प्रतिभाशाली, योग्य र प्रमाणित छ।
उसको चुनौती यो हो कि उसको परम्परागत मार्केटिंगले फूट ट्राफिकलाई आकर्षित गरिरहेको थिएन जुन यो पहिले गर्‍यो। उसको अनलाइन उपस्थिति प्रायः एक ब्रोसर हुन्छ। हामी उसलाई आफ्नो साइट निजीकृत गर्न सहयोग गर्न जाँदैछौं, शिल्प र उसले दैनिक आधारमा देख्ने अविश्वसनीय ग्राहक कथाहरू साझा गर्न मद्दत गर्न, उसलाई प्राप्त गरेको प्रतिभा र अनुभव प्रबर्धन गर्न मद्दत, र उसलाई बाहिरको आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्न आफ्नो स्थान को आसपास केहि माईल।
हामीले छलफल गरेको चीजहरू मध्ये एक ईकमर्स थियो। उसले मलाई हेर्यो कि उनले मलाई विश्वास गर्दैनन् - उनी विश्वास गर्दैनन् आफ्नो अद्वितीय, प्रिमियर, हस्तनिर्मित उत्पादनहरूले त्यहाँ धेरै ठूला ईकामर्स साइटहरूको साथ अनलाइन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछन्। ऊ भोल्युम र यी ठूला कम्पनीहरूको मार्केटिंग बजेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
यद्यपि उनीसँग हुनुपर्दैन। उसले स्थानीय समुदायको लागि एक टन गर्छ जुन उसले साझा गर्दैन। उहाँसँग सामाजिक रूपमा जिम्मेवार उत्पादनहरू छन् जुन उपभोक्ताहरूले बाहिर खोज्न सक्छन्। र, सबै भन्दा राम्रो, यो एक विशाल वैश्विक बजार त्यहाँ छ। प्रतिस्पर्धी देशको बिरूद्ध ड्रप गर्ने शक्ति जस्ता साधारण चीजले उसको विदेशको बिक्रीलाई बढावा दिन्छ। ऊ त्यो व्यवसायमा कहिल्यै आएको थिएन।
यदि तपाईं एक स्थानीय रिटेलर हुनुहुन्छ र तपाईं बिक्री अनलाइन गुमाउँदै हुनुहुन्छ ... राज्यव्यापी बिक्रीको लागि अनलाइन जानुहोस्! यदि तपाईं राज्यव्यापी हुनुहुन्छ भने, राष्ट्रीय जानुहोस्। यदि तपाईं राष्ट्रीय हुनुहुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय जानुहोस्! तपाईं eBay र अमेजन मा उत्पादन राखेर वेब मार्फत तपाईंको पसल सि sy्ख्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र इ-कमर्स प्रणालीले आज नै तपाईलाई विशेषज्ञको आवश्यकता बिना नै बिक्री कर र शिपिंग आवश्यकताहरूको कठिन एरे गणना गर्दछ। तपाईं आफ्नो साइट को लागी खुट्टा ट्राफिक वृद्धि गर्न र दुनिया मा आफ्नो बजार खोल्न जारी गर्न सक्नुहुन्छ!
विश्वको लगभग %२% जनसंख्या इन्टरनेटमा पहुँच छ (जनवरी २०१ access) र यी प्रचलनहरूको आधारमा २०१ it's को अन्तमा मोबाइलले internet०% भन्दा बढी इन्टरनेट प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरेको छ। अनलाइन रिटेलर २०१ for को लागि वैश्विक अवसरहरू.
यहाँ इन्फोग्राफिकबाट केहि हाइलाइटहरू छन्:
बेलायतसँग छ प्रति इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको अधिकतम खर्च२०१ 1364 मा १$2014$ को औसतसँग
ईन्टरनेट प्रयोगको तेस्रो उच्चतम मात्रा भए पनि, भारतको रिटेल बिक्री १% भन्दा कम अनलाइन गरिन्छ
जापान हालसालै उभिएको छ २०१com मा खर्च हुने pred$ बिलियन डलरको पूर्वानुमानका साथ इकमर्स बजारमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा
टैग: ecommerce बजारप्रति इन्टरनेट प्रयोगकर्ता खर्चग्लोबल ईकॉमर्सग्लोबल बजारभारत अनलाइन बिक्रीभारत खुद्रा बिक्रीअन्तर्राष्ट्रिय इकमर्सइन्टरनेट प्रयोगजापानजापान ईकॉमर्सप्रयोगशाला खोज्नुहोस्युके ईकॉमर्स